Chhaharaa | आदिवासी/भूमिपुत्र समुदायका राईलाई अल्पसंख्यक र अपाङ्गता सिटमा उठाउँदा जसपाले प्रदेश नं. १ मा हार बेहोर्नुपर्यो
आदिवासी/भूमिपुत्र समुदायका राईलाई अल्पसंख्यक र अपाङ्गता सिटमा उठाउँदा जसपाले प्रदेश नं. १ मा हार बेहोर्नुपर्यो
गत माघ १२ गते सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन दलले आदिवासी जनजाति समुदायका हेमराज राईलाई अल्पसंख्यक र अपाङ्ग कोटाबाट प्रदेशनं–१ को उम्मेद्वार बनाउदा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले एउटा कोटा गुमाउन पुगेको मात्र छैन जसपा नेपालका एक सशक्त, जुझारू र क्रान्तिकारी नेता राईको राजनीतिक भविश्य समेत सकिने अवस्था बनेको
छ । किरात भूमि भोजपुरका आशा लाग्दा र आदिवासी जनजाति समुदायका उदयमान नेता राईलाई गठबन्धन दल र जसपा नेपाल भित्रैको षडयन्त्रले हराउने काम भएको छ । राईलाई गठबन्धन दलले अल्पसंख्यक समुदायको कोटाबाट उठाउनुनै गम्भीर त्रुटि हुन गएको देखिएको छ। आदिवासी जनजाति समुदायको व्याक्तिलाई अल्पसंख्यकको कोटामा उठाउदा अल्पसंख्यक समुदायका मतदाताहरूले नेकपा(एमाले) का सोनाम ग्याल्जेन शेर्पालाई जिताउन पुगेका
छन् । यसलाई जसपाका केन्द्रीय नेता आङकाजी शेर्पाले सामान्य रूपमा लिन सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेबाट पनि जसपा भित्रैबाट राई माथि अन्तरघात भएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । अर्काेतिर जसपाका संघिय नेता डा.बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अल्पसंख्यक समुदायबाटै यो सिटमा उम्मेद्वार उठाएको भएदेखि यो सिटमा जसपाले सजिलै निर्वाचन जित्ने थियो । उम्मेदवार उठाउदा त्रुटि हुदा जसपाले एक सिट गुमाउन पुगेको देखिन्छ । आगामी दिनमा जसपाले यस्ता त्रुटि सच्चाउनु पर्ने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले), नेकपा(माओवादी केन्द्र), जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपा जस्ता वर्तमान संविधान पक्षधर लोकतान्त्रिक पार्टी मात्र होइन संसदीय लोकतन्त्र र वर्तमान संविधानलाई नमान्ने नेकपा(क्रान्तिकारी माओवादी ), विप्लव नेकपा लगायतका दलका बाम्हणवादी नेताहरूले आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, दलित, मुस्लिम, महिला समुदायका नेता कार्यकर्ताहरूलाई भरिया मात्र बनाउदै आएका छन् । मुल नेतृत्वमा भने सधै बाम्हणवादी नेताले नै कब्जा जमाउदै आएका छन् । आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति समुदायलाई उपयोग गरि सहिद र अपाङ्ग बनाउने तर सत्ता र पार्टीको अवसरमा भने नेतृत्व दिन हिचकिचाउदै आएका छन् । ब्राह्मणवादी भनिएका कांग्रेस एमाले लगायतका दलहरुलेझै जातीय मुक्ति र पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको दुवाई दिदै आएको जसपाले समेत यसरी अल्पसख्यक समुदाय र अपाङ्गता माथि अतिक्रमण गरेको हुँदा हेमराज राई बलिको बोको बन्न पुगे ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक र अन्य समूह गरी ४३ उम्मेदवार सहभागी भएकामा १९ उम्मेदवार विजयी भएका छन् । निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका नगर प्रमुख र उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मतदाता थिए । प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार १८ रहेको
थियो । रुनतिजा अनुसार १८ जना गठबन्धन दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा, राजमोबाट र एक जना नेकपा(एमाले) बाट विजयी भएका छन। प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेसका गोपाल कुमार बस्नेत, नेकपा(एमाले) का सोनाम गेल्जेन शेर्पा, नेकपा(एकीकृत समाजवादी) कि जयन्ती देवी राई निर्वाचित भएका छन। यसैगरि मधेस प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)कि उर्मिला अर्याल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मोहम्मद खालिद, बागमतीमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी गोमादेवी तिमिल्सना, नेपाली कांग्रेसका कृष्ण प्रसाद पौडेल निर्वाचित भएका छन् ।
यस्तै गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसकी कमला पन्त, माओवादी केन्द्रका भुवन बहादुर सुनार, सुरेश कुमार आले मगर, लुम्बिनी प्रदेशमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुल प्रसाद विश्वकर्मा, कांग्रेसका युवराज शर्मा, कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसकी दुर्गा गुरुङ, माओवादी केन्द्रका नरबहादुर विष्ट, एकीकृत समाजवादीका उदयबहादुर बोहरा र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एकीकृत समाजवादीकी मदन कुमारी शाह (गरिमा शाह), माओवादी केन्द्रका जगत बहादुर पार्की र कांग्रेसका नारायणदत्त मिश्र विजयी भएका छन् ।रु यी विजयी राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आगामी फागुन २१ गतेबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाउने भएका छन। फागुन २० गतेबाट रिक्त हुने राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित एक सिटमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारीले फागुन २० गते पछाडिनै मनोनित गर्ने सम्भावना रहेको छ। त्यसका लागि कांग्रेसले विज्ञ व्याक्तिको खोजि गरिरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अन्तर्गत गत बुधबार सम्पन्न मतगणनाको मत परिणाम अनुसार प्रदेश १ मा सत्ता गठबन्धनबाट महिलातर्फ नेकपा एकीकृत समाजवादीकी जयन्ती राई र नेपाली कांग्रेसका गोपाल बस्नेत विजयी भएका छन् । राईले महिलातर्फ नेकपा एमालेकी सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पराजित गरेकी थिइन् भने अन्यतर्फ बस्नेतले एमालेकै गुरु बरालसँग मत बराबरी हुँदा गोला तानेर विजयी भएका थिए ।
अल्पसंख्यकतर्फ भने एमालेका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा विजयी भएका
छन् । गठबन्धनतर्फ जनता समाजवादीका हेमराज राई शेर्पासँग पराजित भएका हुन् । सत्ता गठबन्धनलाई चुनौति दिंदै एमालेले एक मात्र सिट जितेको छ । प्रदेश १ मा गठबन्धनको भन्दा मतभारमा एमाले केही कमजोर देखिएको थियो । तर पनि जसपा भित्रकै अन्तरघातले एमालेले चुनाव जित्न पुग्यो ।
महिलातर्फ विजयी भएकी राईले ४ हजार ६३२ मत प्राप्त गरेकी
थिइन । एमालेकी भण्डारीले ४ हजार ३६२ मत र राप्रपाकी रञ्जु प्याकुरेलले १२० मत प्राप्त गरेकी थिइन् । अन्यतर्फ गठबन्धनतर्फका उम्मेदवार कांग्रेसका बस्नेत र एमालेका बरालले बराबरी ४ हजार ४ सय ८८ मत प्राप्त गरेका
थिए । मत बराबरी भएपछि भएको गोलाप्रथामा बस्नेत विजयी भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको
बस्नेतले प्रदेश सांसदतर्फबाट २ हजार ४ सय र स्थानीय तहतर्फ २ हजार १ सय २४ मत प्राप्त गरेका थिए । बरालले प्रदेश सांसदतर्फ १ हजार ८ सय २४ र स्थानीय तहतर्फ २ हजार ६ सय ६४ मत प्राप्त गरेका थिए । सोही सिटमा राप्रपाका अम्बरबहादुर बिष्टले प्रदेशसभातर्फ ९६ र स्थानीय तहतर्फ ७२ गरी १६८ मत प्राप्त गरेका थिए ।
अन्यतर्फको मत परिणाम अनुसार एमालेका एकजना प्रदेश सांसदको मत राप्रपालाई उम्मेदवारलाई गएको थिए । प्रदेश १ मा एमालेका ४० प्रदेश सांसद मध्ये ३९ मत खसेको थियो। एमालेकी फरार रहेकी सांसद गुलेफुन खातुन भने मतदानमा उपस्थित भएकी थिइनन् । प्रदेश सांसदतर्फ खसेको २९ मतमध्ये अन्यतर्फ एमालेका बरालले ३८ मतमात्रै प्राप्त गरेका थिए । एमालेको मत राप्रपालाई नगएको अवस्थामा बराल र कांग्रेसका सांसदको मत बदर नभएको खण्डमा बस्नेतको जित सुनिश्चित रहेको
प्रदेश १ मा राप्रपाको एकजना मात्रै सांसद छन् । अन्यतर्फ कांग्रेसका एक सांसदको मत भने बदर भएको थियो । कांग्रेसकी एक महिला सांसदले मतदानका क्रममा मतपत्रमा हस्ताक्षर गरिदिएका कारण मतपत्र बदर भएको थियो । यता अल्पसंख्यकतर्फ नेकपा (एमाले)का सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा विजयी भएका छन् । अल्पसंख्यक सिटमा गठबन्धनतर्फका उम्मेदवार जनता समाजवादी पार्टीका हेमराज राई थुलुङलाई पराजित गर्दै शेर्पा विजयी भएका थिए । शेर्पाले ४ हजार ७ सय ५२ मत प्राप्त गरेका थिए । पराजित भएका हेमराजले ४ हजार ३ सय ४६ मत प्राप्त गरेका थिए । शेर्पाले प्रदेश सांसदतर्फ गठबन्धनको दुई मत थप प्राप्त गरेका थिए । थुलुङको हारलाई गठबन्धनभित्रै धोकाको संज्ञाका रुपमा लिइएको छ । गठबन्धनसँग बढी मतभार हुँदाहुँदै पनि उनले हारेका छन् । एमालेकै अनुसार पनि गठबन्धनसँग कूल ४ हजार ६ सय ६८ मत रहेको आंकलन गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश नं १ मा सत्ता गठबन्धनभित्र अन्तर्घात भएको छ । त्यसको फाइदा प्रतिपक्षी दल एमालेलाई भएको देखियो ।
प्रदेश १ मा गठबन्धनका उम्मेदवार हेमराज राई थुलुङ पराजित हुनु अन्तरघातनै ठहर गरिएको छ भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका उम्मेदवारको मत बराबर आउनु पनि अन्तरघात हो भनिदैछ । कांग्रेसका उम्मेदवार गोपाल बस्नेत र एमालेका उम्मेदवार गुरु बरालको बराबर मत आएको थियो । दुबैले समान ४ हजार ४ सय ८८ मत पाएका थिए । तर, गोलाप्रथाबाट कांग्रेसका बस्नेत विजयी भएका थिए ।
अल्पसंख्यकतर्फका उम्मेदवार एवं जनता समाजवादी पार्टीका नेता हेमराज राई थुलुङलाई एमालेका उम्मेदवार सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले पराजित गरे । प्रदेश नं १ मा एमालेभन्दा सत्ता गठबन्धन १४४ मतभारले अगाडि थियो । तर परिणाम उल्टो आयो ।
प्रदेश १ मा प्रदेशसभा सदस्य ९३ जना (हाल ९२) र स्थानीय पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख २७४ (हाल २७२) गरी ३६४ मतदाता थिए । ३ सय ६७ मतदातामध्ये तीन सदस्य रिक्त थियो । प्रदेश नं १ मा ५० प्रदेश सांसद र १२६ पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख रहेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनसँग ४ हजार ६ सय ६८ मतभार थियो । यसैगरि ४१ प्रदेश सांसद र १४२ प्रमुख÷उपप्रमुख रहेको एमालेको मतभार ४ हजार ५ सय २४ थियो । एमाले सत्ता गठबन्धन भन्दा १४४ मतभारले पछाडि थियो । निर्वाचनको क्रममा खसेको चार मत बदर हुँदा एमालेलाई फाइदा पुगेको थियो ।
गठबन्धनको मत पनि एमालेले तान्न सफल भएको थियो । बाँकी ६ वटै प्रदेशमा नतिजा निकाल्न नसकेको एमालेले प्रदेश १ मा भने एक सिट हात पारेको थियो ।
गठबन्धनमा रहेका पार्टीका सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख÷उप–प्रमुखले गठबन्धनको पक्षमा इमान्दारितपूर्वक मत हालेको भए एमालेले राष्ट्रिय सभामा एउटा सिट पनि जित्ने अवस्था थिएन ।
तर, एमालेले गठबन्धनबाट मत तानेर जित निकाल्न सफल भएको छ । राष्ट्रिय सभाको यो निर्वाचनमा प्रदेश नं १ मा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवारलाई गठबन्धनबाटै धोका भएको छ । प्रदेश–१ मा गठबन्धनबाट अल्पसंख्यकतर्फ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका हेमराज राई थुलुङलाई उम्मेदवार बनाइएको थियो । उनी भोजपुरका
हुन् । त्यसैगरी, एमालेबाट सोलुखुम्बुका सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा उम्मेदवार भएका थिए । निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार शेर्पा विजयी भएका छन् । प्रदेश–१ मा एमालेभन्दा सत्ता गठबन्धन १४४ मतभारले अगाडि थियो । प्रदेश १ मा एक प्रदेश सांसदसहित तीन मतदाताले भोट हालेका थिएनन् । त्यसमा पनि एमालेकै सांसद मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए । एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित गुलफेन खातुन मतदानमा सहभागी भएकी थिइनन् । निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखको मतभार १८ हुन्छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बाबुराजा श्रेष्ठ पनि राष्ट्रिय सभा सदस्यको मतदानमा सहभागी भएनन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाकी उपमेयर इन्दिरा कार्की पनि मतदानमा गएकी थिइनन् ।
प्रदेश १ मा ५० प्रदेश सांसद र १२६ पालिका प्रमुख÷उपप्रमुख रहेको पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनसँग ४ हजार ६ सय ६८ मतभार थियो । ४१ प्रदेश सांसद र १४२ प्रमुख÷उपप्रमुख रहेको एमालेको मतभार ४ हजार ५ सय २४ थियो । एमाले सत्ता गठबन्धन भन्दा १४४ मतभारले पछाडि थियो । तर, सत्ता गठबन्धनका सांसद र प्रमुख÷उपप्रमुखले इमान्दारीपूर्वक गठबन्धनको पक्षमा मतदान नगर्दा गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका जसपाका नेता हेमराज राई थुलुङ पराजित भएका छन् ।